News Collection: सेक्स साधना र पूजा हो: नायिका रेखा थापा
सेक्स साधना र पूजा हो: नायिका रेखा थापा
नायिका रेखा थापा सधै चर्चामा हुन्छिन् । पछिल्लो समयमा नेपाली रजतपटकी यि एक छत्र राज गर्ने नायिकाको श्रीमान् छवि ओझसंगको सम्बन्धका कारण विवाद र चर्चामा छिन् । पछिल्लो समय श्रीमान् छविले आफु रेखाबाट सेक्स पीडित भएको बताएपछि यो जोडी थप चर्चामा छ । सेक्सकै बारे रेखाले कृष्ण भट्टराईलाई दिएको अन्तर्वार्ता
तपाईंलाई सेक्सको आवश्यकता कत्तिको पर्छ ?
वयस्क महिला हुँ, सेक्सको आवश्यकता नै त पर्दैन भन्दिनँ, तर कामको व्यस्तता र तनावका कारण यो विषयमा सोच्ने फुर्सद पनि हुँदैन। त्यस्तै दुई हप्तामा एकपटक चाहिं गरिएला !
तपाईंको दृष्ट्रिमा सेक्स के हो ?
सेक्स भनेको साधना हो। म यसलाई पूजाका रूपमा लिन्छु।
सेक्समा पनि साधना र पूजा भन्ने हुन्छ र ?
अवश्य हुन्छ। सेक्स दाल-भात खाएजस्तो सजिलो कार्य होइन। यसका लागि राम्रो वातावरण, राम्रो मुड, गोप्यता अनि शुद्धता आवश्यक हुन्छ।
मानिसहरू त सेक्स भनेपछि मरिहत्ते गर्छन् नि ?
त्यो त यसलाई नबुझेका मानिसहरूले गर्ने कुरा हो। सेक्समै लालायित मानिसहरू मात्र यसका बारेमा चौबीसै घण्टा सोचिरहन्छन् तर संसारमा त्यस्ता धेरै ब्रह्मचारी, योगी एवं संन्यासीहरू छन् जो सेक्स नगरीकनै बाँचेका छन्।
सेक्स नै नभएको भए के हुन्थ्यो होला ?
सायद तपाईं-हामी कसैको पनि अस्तित्व हुँदैनथ्यो।